FAALLO:-Wada-jir bay laba gacmood wax ku gooyaan. – Puntland Voice
FAALLO:-Wada-jir bay laba gacmood wax ku gooyaan.
June 23, 2015 9:57 am Views: 344
Iyadoo dhismihii iyo dhidibba u taagidii dawladda Puntland ay gogol dhig u ahayd isku tashiga iyo rabitaanka shacabka reer puntland haddana mar walba waxaan la hilmaami kareyn oo qofkasta maskaxda uu ku hayey waxa keliya ee uu ku hana qaadi karo maamulkaa cusub ee la yag leelay inay tahay oo keliya Midnimo iyo wax wada qabsi.
Diinta islaamku meelweyn ayay gaadhsiisey midnimada qiime weyn bayna uyeeshay midnimada iyo iskaashiga waana tan keliya ee markii ay bulsho ka dhabayso ay heer ku gaadhi karto soomaaliduna iyadoo arrintaasi ka duuleysa ayay hore ugu maahmaahday“Gacmo wada jir bay wax ku gooyaan”.
Waxaa jirey dagaal ka dhan ah midnimada Puntland oo bilowday islamarkii dhidibada loo taagey Puntland kaas ujeedkiisu ahaa manja xaabin lala damacsanaa in lagu burburiyo maamulkaas oo markaasi loo arkaayey dabka keliya ee kasoo bidhiiqay soomaaliya.
Waxaana kashaqaynayey hurgumada iyo hagardaamadaasi dad soomaaliyeed oo dhinacyo badan deris ama jaaraan kala ah Puntland kuwaas oo weli ku mashquulsan kala geynta iyo isku dirka shacabka reer puntland.
Haddaba iyadoo arrintaasi laga duulayo waxaa biya kama dhibcaan noqotay Puntland inay isku tashato ayna adkayso midnimadeeda iyadoo uu hormuud uyahay hoggaamiyaha aragtida dheer ee Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ah hoggaamiye ay ka go’antahay horumarinta Puntland isla markaasina ay meel uga soo wada jeestaan kuwa hadh iyo habeen ku mashquulsan duminta, kala daadin iyo isku dirka shacabka reer puntland.
Cadowga Puntland ma aha Argagixisada nabaddiidka oo keliya balse waxaa inta badan iyaguna ku hawlan duminta Puntland Siyaasiyiin aragti gaaban iyo maskax shisheeye ku shaqaynaya kuwaas oo kasoo jeeda puntaland iyo soomaaliya inteeda kaleba, waxaan iyana meesha kamaqnayn maamul goboleedyada deriska la ah puntland oo daandaansi iyo dhul durugsi siyaasad xumo iyo qabyaaladi ku milantahay kuwada Puntanland Haba ugu weynaadaan maamulka soomaaliland oo iyagu argagixiso usoo adeegsada puntland si’ay u helaan deegaano Puntland dal ahaan iyo dad ahaanba uga tirsan oo ay iyagu sheegtaan.
Haddaba Muwaadin Arrintaasi waxa keliya ee aan kaga gudbi karnaa waa inaga oo isku duuubnaana oo ilaashanna midnimadeed iskana qabanna kuwa inaga inaku dhexjira oo xambaarsan fikradaha shisheeyaha kuna hawlan hadimadeena.
Ugu dambayntii farriinta keliya aanu u dirayno shacbiweynaha reer puntland meelkastoo ay joogaanba waa inay ka shaqeeyaan midnimadooda iyo iskaashigooda iyagoo iska illaawaya waxkastoo khaladaad ah oo lakala tirsanayo maxaa yeelay marka laysu tanaasulo ayaa isku ujeeddo la noqdaa markaas ayaa xitaa waxaa daalaya oo hungo iyo hoog ay u tahay kuwii kashaqaynayey isku dirkeena iyo kala fogeynteena.
Puntland ha noolaato, haysku tashato, guul iyo gobanimo.